Tsaroan'i Amerika ireo niharan-doza 9/11 20 taona taorian'ny fampihorohoroana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Tsaroan'i Amerika ireo niharan-doza 9/11 20 taona taorian'ny fampihorohoroana
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Crime • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny fahatsiarovana dia lasa fomba fanao isan-taona, fa ny sabotsy kosa dia misy lanjany manokana, 20 taona aorian'ny maraina izay heverin'ny maro ho fiovan'ny tantara amerikana. Tao anatin'ny fampahatsiahivana maharary momba ireo fanovana ireo, vao herinandro lasa izay i Etazonia sy ireo tafika mpiara-dia dia nahavita nisintona fisavoritahana tamin'ny ady natombok'i Etazonia tany Afghanistan fotoana fohy taorian'ny fanafihana valifaty - izay lasa ady lava indrindra tamin'ny tantaran'i Etazonia.
Ny 11 septambra maty dia nankalazaina tamin'ny faha-20 taonan'ny fanafihana.
Ny filoham-pirenena Biden dia miantso firaisankina amin'ny faha-20 taonan'ny 9/11.
Fahatsiarovana tanterahina any New York City sy ny firenena.
Tamin'ny tsingerintaona faha-20 nisian'ny fampihorohoroana natao tamin'ny World Trade Center sy Pentagon, dia niara-nivory ny Amerikanina mba hahatsiaro sy hanome voninahitra olona efa ho 2,977 namoy ny ainy tamin'ny 11 septambra 2001.
Lanonana sombery anio amin'ny Fahatsiarovana 11 septambra ao New York City natomboka tamin'ny fahanginana tamin'ny 8 ora maraina (46:12 GMT), ny fotoana marina tamin'ny fiaramanidina mpandeha an-keriny roa dia nianjera tao amin'ny World Trade Center an'ny New York City.
Avy eo dia nanomboka namaky tamin'ny feo avo ny havan'ireo niharam-boina ny anaran'ireo olona 2,977 XNUMX maty noho ny fanafihana, fombafomba fanao isan-taona izay maharitra adiny efatra.
“Tianay ianao ary malahelo anao izahay,” hoy ny maro tamin'izy ireo rehefa nitendry nandritra ny lanonana ofisialy ny mozika violon somber, natrehin'ny olona ambony toa ny filoha Joe Biden sy ny filoha teo aloha Barack Obama ary Bill Clinton.
Tao amin'ny Ground Zero any New York City, olona 2,753 XNUMX, manerana an'izao tontolo izao, no maty tamin'ny fipoahana voalohany, nitsambikina ho faty, na nanjavona fotsiny tao anaty afon'ny tilikambo nianjera.
Ao amin'ny Pentagone, fiaramanidina iray no nandrovitra ny lavaka nirehitra teo anilan'ny ivon-toeran'ny tafika mahery, izay nahafaty olona 184 tao anaty fiaramanidina sy tamin'ny tany.
Ary tany Shanksville, Pennsylvania, ny onjan'ny mpaka an-keriny fahatelo dia nianjera tany an-tsaha rehefa avy niady ireo mpandeha, nandefa an'i United 93 alohan'ny hahatongavany amin'ny tanjona kendreny - angamba ny tranon'ny US Capitol any Washington.
Ny fahatsiarovana dia lasa fomba fanao isan-taona, fa ny sabotsy kosa dia misy lanjany manokana, 20 taona aorian'ny maraina izay heverin'ny maro ho fiovan'ny tantara amerikana.
Tao anatin'ny fampahatsiahivana maharary momba ireo fanovana ireo, vao herinandro lasa izay i Etazonia sy ireo tafika mpiara-dia dia nahavita nisintona fisavoritahana tamin'ny ady natombok'i Etazonia tany Afghanistan fotoana fohy taorian'ny fanafihana valifaty - izay lasa ady lava indrindra tamin'ny tantaran'i Etazonia.
Ny fahatsiarovana androany dia tonga satria ny fifanolanana nasionaly dia nanaloka ny fahatsapana fanakatonana ao anaty hatezerana noho ny fisafoahana Kabul, izay nahitana miaramila amerikana 13 novonoin'ny baomba namono tena.